DemandJump: UQikelelo lweNtengiso kunye neNtloko yoKhuphiswano | Martech Zone
DemandJump: Ukuthengisa kwangaphambili kunye noKhuphiswano lobuntlola
NgeCawa, ngoMatshi 6, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
I-Intanethi ngumthombo omangalisayo wedatha oya kuthi, ukuba ugrunjiwe, unokuvelisa ubutyebi bolwazi. Kodwa ngoku Uphando lweCMO kulo nyaka, kuphela isinye kwisithathu sabathengisi abanakho ngqina ifuthe Inkcitho yabo yentengiso, sisiqingatha kuphela esikwaziyo ukufumana into elungileyo imeko esemgangathweni yefuthe, kwaye phantse i-20% bayakwazi kulinganisa nayiphi na impembelelo nantoni na. Akumangalisi ukuba ukuthengisa kubahlalutyi Inkcitho kulindeleke ukuba inyuke ngama-66% kwiminyaka emithathu ezayo.
Njengoko ipesenti yabathengi kunye nohambo lokuthenga ishishini luhamba kwi-Intanethi, abathengisi bayaqonda ukuba kufuneka bafumane umyalezo phambi kwabaphulaphuli abafanelekileyo apho bakhoyo. Ukuthengisa umxholo, ukuthengisa imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye nentengiso yempembelelo eqhubeka nokunyuka njengoko amanye amajelo entengiso efikelela ekugcwaliseni.
ImfunoJump yinkqubela phambili enkulu kubukrelekrele bokuthengisa kwangaphambili, obenza ukuba abathengisi bafumane amathuba entengiso, ukulandelela iintshukumo zokhuphiswano kunye nokukhawulezisa ukugcwala kwakho kunye nokuguqulwa. Ukujonga ngokukhawuleza kwideshibhodi yabo kukubonelela ngesishwankathelo sodluliselo lwakho lokujonga kunye namathuba, kubandakanya ukuvelisa okukhokelayo, iindaba kunye namathuba e-PR, amathuba e-eCommerce, amathuba okudibana, ibhlog kunye namathuba omxholo, kunye nokunye.
Umxholo weNtengiso yeNtengiso
Usebenzisa izixhobo zobukrelekrele beDemandJump, ungabeka esweni yonke into eveliswa ngabakhuphisana nabo, isebenza kakuhle kangakanani, kwaye uchonge nemithombo yokuhanjiswa kwetrafikhi kumxholo wabo.
Oku kunokukunceda ukhombe abachaphazeli kunye neendawo ekubhekiswa kuzo eziya kuthi ziqhube ukugcwala kwabo bantu. Iqonga lide libonelele ngezixhobo zolawulo lobudlelwane ukuze ugcine ulawula kwaye ulandele ubudlelwane obuphambili kunye nefuthe lakho.
Isosi eyimfihlo ngasemva ImfunoJump yingqokelela yolwazi oluphambili lokukhuphisana onokulufumba eqongeni ukuze ulawule umxholo wakho kunye neendlela zokukhuthaza. Khawufane ucinge ukuba unayo inkcitho yokuthengisa entsonkothileyo kwiinethiwekhi ezininzi zentengiso, bonisa inethiwekhi yentengiso, inkxaso-mali kunye nezinye iindlela. I-DemandJump inokukunceda uchaze ukuba yeyiphi imithombo eqhuba ukugcwala kunye nokuzibandakanya, hayi inethiwekhi zentengiso abaziqhubayo. Bade babonelele ngokwabo amanqaku okufumana amanqaku kwi-algorithm ukubeka phambili amathuba aya kuthi abenempembelelo enkulu.
Ukuqonda ukubekwa kwentengiso okhuphisana nabo besebenzisa ubuchule babo kunokukunceda uqonde amaqonga ekufuneka ukhuphisana nawo nawo.
kunye ImfunoJump, Abathengisi abakwi-Intanethi kulo naluphi na uhlobo lweshishini- ukusuka kwi-e-commerce, ushicilelo, ishishini ukuya kwishishini, ukuya kwiingeniso ezinokufumana ulwazi olungenakuthelekiswa nanto kwisicwangciso-qhinga sabo sentengiso esinamajelo amaninzi. Jonga apho ufumba phezulu xa ukhuphisana nabantu abakhuphisana nabo kunye nokuba leliphi inyathelo omele ukulithatha ukuze ukhule.
Amava oMdibaniso tsiba ngokusebenza!
Ukubhengezwa: Ndisebenze ngokusondeleyo nomsunguli uShawn Schwegman kule minyaka idlulileyo, siphumeze isisombululo kwimizamo yethu, kwaye sidala ubuhlakani obuqhubekayo kunye ImfunoJump.
tags: ubukrelekrele benethiwekhi yentengisourhwebo umanyanisoulwazi lokhuphiswanoUkuThengiswa kweMpahlaibango xhumaukufunaulwazi lwentengiso yedijithalie-commerceeCommercefumana abachaphazeliindlela yokufumana abachaphazelinefutheiqonga lempembeleloisizukulwana esikhokelayoubukrelekrele bokwazisaUkuhanjiswa kweendabaUhlalutyo oluqikelelweyoubukrelekrele bengqikeleloukuthengisa kwangaphambiliubudlelwane boluntuukuthunyelwa kwendlela
Spoutable: Iintengiso zaMakhaya eziNdwendwela abahambi
AbaPhengululi babona njani kwaye ucofe kwiziphumo zikaGoogle zokuKhangela